एजेन्सी/ आश्विन १, 2077
काठमाडौं । संसारभर भएका विभिन्न अध्ययनले मानिसले जस्तै जनावरले पनि यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । धेरैलाई सन्तान प्राप्तिका लागि मात्रै जनावरले यौन क्रिया गर्छन् भन्ने लाग्ने गरेको छ । तर, संसारभरका दर्जनौँ अध्ययनबाट जनावरले पनि यौन आनन्द लिने गरेको पाइएको छ ।
अमेरिकाको कोलोराडो युनिभर्सिटीका विज्ञ मार्क बेकोफले लाइफसाइन्सेस डटकममा लेखेको आलेखमा धेरैजसो स्तनपायी जनावरहरूले यौन जीवनको बारेमा आनन्द लिने गरेको उल्लेख छ ।
अध्ययनमा धेरै जनावरहरूले बच्चा जन्माउनकै लागि यौन सम्बन्ध राख्छन् । केही जनावरले भने यौन आनन्दका लागि पनि यौन क्रिया गर्ने गरेको पाइएको छ । केही जनावरले विशेष मौसममा यौन सम्बन्ध राख्ने गरेका छन् ।
समाजशास्त्रीहरुले सर्पजस्ता केही जीवले यौन सम्पर्क राख्नुअघि सेक्स अघि ‘फोरप्ले’को मजा लिन्छन्, जुन एक घण्टासम्म चल्छ । बोनोबोज र डल्फिनहरूले मनोरञ्जनका लागि यौनसम्बन्ध राख्ने गरेको विभिन्न अध्ययनमा उल्लेख छ ।
जीव सम्बन्धि वैज्ञानिक जस्टिन गर्लाच कछुवाहरूले आनन्दको लागि नै यौनसम्पर्क राख्ने गरेको दावी गर्छन् । बाँदरको यौनसम्पर्क भने मानिससँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । उनीहरूका लागि पनि यौन केवल सन्तान प्राप्तिका लागि मात्रै हुँदैन । बाँदरहरूले हस्तमैथुन पनि गर्छ भन्ने वैज्ञानिकहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
जनावरहरुमध्ये बाँदर मानिस जस्तै यौनमा सक्रिय हुने गरेको छ । जनावरविद् डा. मुकेश चालिसेका अनुसार बाँदरले अर्काकी श्रीमतीसमेत लैजाने गरेको छ ।
जनावरहरूमा यौन आनन्दको पहिचान र मापन गर्न गाह्रो छ तर तिनीहरूको अनुहारको हाउभाउ, शारीरिक चालचलन र स्नायु, मांसपेशीहरू हेरेर जनावर पनि आनन्दको चरम सीमामा पुग्छन् भन्ने वैज्ञानिकहरुको निष्कर्ष छ ।
एउटै भेडाको मुल्य ५ करोड बढी
एजेन्सी । स्कटल्याण्डको टेक्सल प्रजातिको भेडा ५ करोड ७३ लाख बढीमा बिक्री भएको छ । यो संसारको महँग...
मान्छेलाई नै फँसाउन सक्ने माकुराको ठूलो जालो ?
एजेन्सी । संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिसौरी राज्यको एक जंगलमा माकुराको ठूलो जालो देखिएको छ । जालो यत...
काठमाडौं । संसारभर भएका विभिन्न अध्ययनले मानिसले जस्तै जनावरले पनि यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्छन् भ...
यस्तो पनि ! नेपालमै फल्छ विश्वकै सबैभन्दा महंगो तरकारी, किनेर खान सक्नुहुन्छ ?
काठमाडौं । के तपाइँलाई थाहा छ विश्वको सबैभन्दा महंगो तरकारी कुन हो ? यसबारे थाहा पाउँदा तपाइँलाई ...
कोरोनाको डर भगाउन हरर थेरापी अपनाउँदै जापानिज, कफिनमा बस्दै जिउँदो मानिस
एजेन्सी । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को चपेटामा पुरै विश्व रुमल्लिएको अवस्था छ । मानिसमा कोरोना संक्...
३२ रुपैयाँमै ‘यौन प्यास मेटाउन’ युवती किन्न पाइने अचम्मको चलन
भारत । हामिले अहिलेसम्म मानिसको मूल्य कति छ भन्ने थाहा हुन सकिएको छैन । हुन त मानविय मुल्यको परिक...